Ungakugwema kanjani ugaxekile nokusikisela ukuvala imininingwane yakho eyimfihlo - i-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Ungakugwema kanjani ogaxekile neziphakamiso ukuvala imininingwane yakho eyimfihlo
Futhi, manje uthola ithani ogaxekile ku-imeyili yakho. Ngabe abantu bakuthumela izincwadi ezikunikeza zonke izinhlobo zezindlela ezahlukahlukene zokulungisa noma iyiphi inkinga abona ukuthi yenzekile kungenzeka noma ongayilindanga? Noma ingabe unecala elilindile elimelene nawe?
Lesi isifinyezo esisheshayo sendlela yokusiza ukusika kuleya ogaxekile kanye neposi elingelinye le-junk. Kunezinkampani ezinjengabantu -othisha noma i-mylife.com eziqoqa lonke ulwazi lwakho lomuntu siqu olunokwenzeka ngamarekhodi omphakathi.
Bona-ke bayaphenduka bayithengise kunoma ngubani abangaba nakho. Kukhona nezinkampani ezinjenge-sbubug.com lapho nje zingaba negama lakho nekheli zingathengisa ngokuyisisekelo ikheli lakho le-imeyili uma zinikezwe zona ngasikhathi sinye noma kwesinye.
Ngakho-ke ukuya phambili kunezindlela ongaphuma kuzo kulezi zinhlu. Ngakho-ke ukuthi awuboshwa nge-imeyili evela kubo.
Nayi eminye imibono engakusiza ukugwema ogaxekile ngokuzayo uzitholele ikheli lesibili le-imeyili kukhona iwebhusayithi efana nesikhashana efana ne-imeyili isebenza kuphela imizuzu eyi-10.
Ngakho-ke uma udinga ukugcwalisa ifomu futhi awusoze wafuna i-imeyili futhi kulaba bantu. Noma, ungaya lapho uzothola ikheli le-imeyili dummy. Vula esinye isikhangiso se-Google ikheli lakho le-imeyili.
Sebenzisa leyo imeyili lapho nje wonke ugaxekile wakho ne-junk uthunyelwa khona uma wena uma i-imeyili yakho isivele ikhona ekubonakaleni komhlaba.
Kunezindawo ongaya kuzo njengolunye lwazo i-Networkadvertising.org. Banohlu lweqwaba yezindawo uma ungangena lapho ubeke imininingwane yakho lapho ungabatshela ukuthi bayeke ukuthengisa imininingwane yakho.
Lesi isikhumbuzi esisheshayo nje sobungani uma ungafuni ogaxekile kunezindlela ongayenza ukuze ulwe nazo. Uma uthola umyalezo we-imeyili noma incwadi evela kithi, futhi ucasukile nathi.
Vele usitshele ukuthi ngeke siphinde sikuthumele i-imeyili. Sifuna ukwenza noma yini ukwenza impilo yakho ibe lula. Imvamisa sisiza abantu ukuthi balwe nokubekwa phambili noma ukuqeda isikweletu. Uma sikufinyelele ngephutha, siyaxolisa ngokungakuphazamisi. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga